Ovy | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ny fomba hiatrehana ny karazana volombava volomparasy ao Colorado
Ny voanio Colorado dia voapoizin'ny alim-be fahavaratra. Indraindray dia sarotra be ny mamonjy ny ovy eo amin'ity pestôla ity. Ny bibikely dia mifanaraka amin'ny pestiside, mihamaro be dia be ary mandritra ny andro maromaro, dia manimba ny vokatra avy amin'ny ovy, ka mampihena ny vokatra. Noho izany, ato amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny voangory kolo-pokonolona Colorado isika ary ny ady amin'ny olom-pirenena.
Ahoana ny fomba famongorana ny voamadinika ao Colorado miaraka amin'ny voanio sy vina
Ny voamadinika ao Colorado dia karazana bibikely avy amin'ny fianakaviana voangory volom-borona, vondron'ny voankazo tena izy. Nahita an'i Thomas Sayem, mpiondana aterineto, tamin'ny 1824, iray amin'ireo karazam-bibikely mampidi-doza indrindra. Tsy amin'izao fotoana izao, fa ny famonoana bibikely ihany no miady amin'ny voangory, fa ny volavolam-pandaminana ho an'ny voangory Colorado koa dia nahazo laza malaza.
Voangol-piaramanidina Colorado: fanoritsoritana tsimokaretina tsy fahampian-tsakafo ary tsy vitan'ny hoe
Ny voangory Colorado (Leptinotarsa ​​decemlineata) dia avy amin'ny fianakaviana voangory voangory, ny baikon'ny voangory. Io no iray amin'ireo bibikely maloto indrindra ao amin'ny zaridaina zaridaina sy zaridaina, izay mitondra fahavoazana lehibe. Fantatrao ve? Ho an'ny fanangonany ny loko mainty dimy eo amin'ny tsirairay avy amin'ny ilany roa, ny voangory Colorado avy any Colorado dia nahazo ny anarany, izay midika ara-bakiteny hoe latina.
Famaritana, toetra ary endri-pananganana karazana kiwi Kiwi
Ny vary varimbazaha Kiwi dia iray amin'ireo tsy fahita indrindra, izay manavaka ny endrika tsy mahazatra amin'ny fambolena fototra sy ny firafitry ny voanjo. Ity karazany ity dia tsy hita matetika any amin'ireo fivarotana sy any amin'ireo talantan'ny firenena CIS, ka tsy dia fantatra loatra ny ankamaroan'ny mpamboly aminy. Na izany aza, maro amin'ireo mpamboly maro no tia ny Kiwi siramamy noho ny fahasalamany amin'ny teknolojia momba ny fambolena sy ny vokatra tsara.
"Prestige" avy amin'ny voangolin'i Colorado: ahoana no fomba hanatsarana ny ovy eo anoloan'ny fambolena
Ny pesta lehibe indrindra amin'ny ovy dia mbola ny voamadinika ao Colorado. Nandritra ny taona maro dia niezaka ny hitady fitaovana mahomby amin'ny ady amin'ny mpamboly. Amin'izao rehetra izao fantatra ankehitriny, iray amin'ny tsara indrindra ny zava-mahadomelina voangory. Inona io fitaovana io ary inona no endri-javatra, dia hiteny bebe kokoa isika. "Prestige": famaritana, fanangonana ary famoahana Famaranana Ny fampiasana zava-mahadomelina dia fifindrana mifantoka, izay mihalevina amin'ny ampahany samihafa, miankina amin'ny fomba fampiharana.
Karazana fampiasana ny "Taboo" zava-mahadomelina ho an'ny fanodinana ovy
Ny zaridaina rehetra dia miatrika olana toy ny fihinanana ovy avy amin'ny voankazo koloina Colorado, ary miezaka ny hahita ny fomba tsara indrindra vitany hiadiana amin'io bibikely io. Ny fanandramana dia maneho fa ny poizina avy amin'ny voankazo koloina, voavoatra araka ny fomba mahazatra "homemade", dia tsy mitondra vokatra tadiavina, noho izany, mihabetsaka hatrany, ireo mpihinana potato dia mampiasa Taboo, izay mikarakara tsara ny voangory.
Ny legioma dia sakafo mahavoky olona maro. Na dia izany aza, vitsy no mahalala ny fomba hambolena izany araka ny tokony ho izy mba hahazoana ny vokatra faran'izay betsaka. Ny mpikaroka za-draharaha dia mahatakatra ny maha-zava-dehibe ny asa toy izany, ary ny mpirotsaka dia liana amin'ny antony manangom-bokatra sy ny fomba hanaovana azy tsara. Raha ny marina, ny maha-zava-dehibe izany fepetra izany dia tena goavana, satria aorian'izany dia afaka mahazo vokatra tsara ianao.
Ahoana no hananana karazana vary "Gala" ao amin'ny faritra misy azy ireo?
Rehefa mifidy karazana voankazo iray mba hambolena eo amin'ny teti-bola ianao dia zava-dehibe ny mihaino tsara ny fisiana, ny fiterahana, ny fikarakarana fikarakarana, ny fanoherana ny aretina, ary ny toetra tsaran'ilay zavamaniry malaza.
Ireo toro-hevitra ambony momba ny ovy eo amin'ny fitomboany any Siberia
Siberia dia faritra goavam-be iray tarihin'ny toetan'ny kontinanta marobe. Ho an'ny fambolena fambolena dia faritra tena mampidi-doza izany. Ny fananana vokatra tsara amin'ny toe-javatra henjana dia tena olana. Na dia izany aza, ny plante sy ny fitomboan'ny ovy ao Siberia dia manana toerana manan-danja eo amin'ny fampandrosoana ny fambolena.
Hazo ompiana "Rozara": fitsipika ho an'ny fambolena sy fiahiana
Ny legioma no legioma malaza indrindra amin'ny orinasantsika. Tsy misy afa-tsy ny sakafo tsy misy an'ity kolontsaina ity. Maro ireo karazana kolotsaina maro, saingy ny karazana "Rosara" dia nahazo laza. Mampifangaro tsara ny fanandramana sy ny sakafo mahasalama izy io. Io karazany io dia tsy misongadina ary mihamitombo amin'ny toetry ny rivotra.
Ahoana no hiatrehana ny bibikely masira
Ny isan'ny bibikely sy ny aretina ao amin'ny ovy dia mifanohitra amin'ny lazany. Ny mpamboly tsirairay dia tsy voatery mihevitra ny fahasimbana isan-karazany amin'ny fambolena fototra ary mahazo fahavoazana lehibe amin'ny fijinjana noho izy ireo. Noho izany, izay mihinana ovy, ahoana no hiatrehana ireo bibikely manimba ary manohy misoroka ny fanafihan'izy ireo - vakio momba izany ao amin'ny lahatsoratra.
Fomba fikarakarana aretina ovy
Ny mpikaroka sasany, mba hisorohana ny fatiantoka amin'ny aretim-pototra, dia namboly fambolena fototra amin'ny teknolojia vaovao ao anaty barika, kitapo ary ambanin'ny ala. Nefa vetivety dia resy lahatra izy ireo fa tsy mamonjy ireo klioba avy amin'ny bakteria, holatra sy viriosy izay miteraka aretina isan-karazany. Они беспощадно поражают здоровые растения и их плоды в открытом грунте, теплице и даже в погребе.
Ahoana ny fomba hisorohana sy hiatrehana ny fihinam-biriky
Ny felatanana lava (na mena volomparasy) no aretina mahazatra indrindra amin'ny voankazo, anisan'izany ny ovy. Ny mpamorona ny aretina dia ny holatra. Ao amin'ity lahatsoratra ity no hianaranao ny antony mahatonga ny voankazo lava sy ny fepetra mifehy ny aretina. Ny antony mahatonga ny ovy no antony mahatonga ny fivoaran'ny tsimokaretina voadaroka voadona amin'ny asany antsoina hoe oomycete, izay an'ny fungi ambany.
Ny karazana varim-piofanana tsara indrindra ho an'ny fambolena any Siberia
Na inona na inona ny ovy ary na aiza na aiza misy anao, dia sakafo mahasalama eo amin'ny latabatra. Na izany aza, raha miaina any Siberia ianao, dia sarotra kokoa ny toe-javatra. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny karazana ovy isika, ny fomba sy ny fotoana hambolena, miaina eto amin'ity faritra ity. Na dia eo aza ny fisian'ny karazana vary maro dia mbola mitohy ny fipetrahana amin'ny tapaky ny volana Mey - izao no fotoana tokony hambolena ovy ao Siberia.
Miezaka mafy amin'ny poti-potaka izahay
Ankoatra ny voka-dratsy, manangom-bokatra maro koa ny landihazo. Ny aretin'andoha sasany dia lasa matanjaka kokoa noho ny taona vitsy lasa izay, ary miteraka ahiahy eo amin'ireo zaridaina izany. Mandritra izany fotoana izany dia tsy misy antony hisian'ny fisavorovoroana - raha fantatrao ny fisian'ny phytophthora ao anaty ovy sy ny fomba hiadiana amin'izany, dia afaka mamonjy ny vokatra ianao.
Bibikely irbit ao amin'ny trano fonenanao
Inona ny karazana "Irbitsky", inona ny endriny, ny famaritana sy ny toetoetran'ny karazany, ary koa ny sary sy ny fanamarihana - ireo dia fampahalalana ilaina izay mety ho an'ireo mpamboly mpamboly izay te-haniry izany legioma izany ao amin'ny teti-dratsiny manokana. Ny toetra sy ny famaritana ny karazana vary "Irbitsky" dia karazana fampanantenana ho an'ny fitomboan'ny zaridaina legioma.
Zava-maniry varimbazaha: voaloham-bokatra, matevina, mahavokatra
Io karazana poti-javatra io dia mirehareha amin'ny anarana hoe "Good Luck" satria maneho ny fahombiazan'ny ezaka maharitra sy mavesatra ho an'ireo mpahay siansa ao amin'ny Fikambanana Rosiana Fikambanana Rosiana Rehetra antsoina hoe Potato. A. G. Lorkha hitondra ny karazana tsara indrindra amin'ity legioma ity. Ny karazana "Luck" dia maro amin'ireo mpamboly, mpilatsaka an-tsaha ary mpihinam-pototra tsotra no misafidy ho azy ireo, ary ho azy dia hanokana ny lahatsoratra izay ahitanao ny famaritana amin'ny antsipirihany momba ny karazana amin'ny sary, ny toetr'andro sy ny hevitra momba ny mpanjifa.
Ahoana no hikarakaràna ovy?
Ankehitriny dia misy fomba maro ahafahana maniry io legioma io. Raha vao tsy lehibe: amin'ny fomba nentim-paharazana, sy ny hady, ary ny havoana. Saingy misy fomba iray hafa tsy mahazatra - ovy mihinana ao anaty kitapo. Ny tombony sy ny tsy fahampian'ny fomba fiasa Ny tombony azo antoka indrindra dia ny mamonjy ny toerana ao an-jaridaina.
Potato "Queen Anne": mahavokatra sy maharitra
Ny mpamboly isan-karazany dia maniry ny manondraka karazana voaloboka tsara indrindra, izay miaro amin'ny viriosy sy ny mikraoba mikraoba, ary mora mambolena ao amin'ny latabatra ary manome legioma marefo manerantany. Ireo faniriana ireo dia novolavolain'ny mpamboly alemana, izay, taorian'ny ezaka maharitra sy ny fanandramana, dia nanolotra karazan-tsakafo vaovao manerantany, Queen Anne.
Fambolena sy fikarakarana varim-bazaha Adretta
Tsy misy trano fialantsasatra tsy vita raha tsy potipotiny. Mampiasa an'io legioma io izahay mba hikarakarana sakafo maro, matetika hita eny amin'ny latabatra. Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny inona ny karazana Adretta, manoritsoritra ny karazany, manolotra ny sary sy ny hevitrao. Ny toetra sy ny fanoritsoritana ny karazana Ny karazana "Adretta" dia niseho 20 taona lasa izay vokatry ny asan'ny mpamboly alemana.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Ovy